Home News Magaalooyinka Qaar Ee Dalka Ciraaq Oo Ay Shacabka Dibad baxyo Kasameenayaan
Magaalaada Basra ee dalka Ciraaq ayaa waxaa ka sii socda dibadbaxyo rabshada wata oo ay dadka kaga soo horjeedaan dowladda.
Ayatollah Ali Sistani, oo ka mid hogaamiyayaasha Shiicada ee dalka Ciraaq ayaa rabshadahaani ku eedeeyay dowladda.
Waxa uu ku baaqay in maamul cusub la dhiso kaasi oo ka duwan maamuladii horey dalkaasi uga arrimin jiray.
Siyaasiyiinta Ciraaq aya la daalaa dhacaya sidii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad shaqaysa ka dib markii doorashdii dalkaasi ka dhacday uu xisbana ku soo bixi waayay aqlabiyada.
Dhismooyiin dheeraad ah ayay weerar ku qaadeen dibadbaxayaasha, waxaana ka mid ah goobaha la weeraray qunsuliyadda Iiraan oo dab la qabadsiiyay.
Mid ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa toogasho lagu dilay.
Xukuumadda Ciraaq ayaa bandow ku soo rogtay magaalada Basra, islamarkana ciddii waddooyiinka lagu arko 9 habeenimo ka dib waxa ay wajahaysaa Xarig.
Previous articleDuqeyn Diyaaradeed Oo Ka Dhacday Deegaano Hoostaga Degmada Jilib Oo Sarkaal Sare Oo Katirsanaa Ururka Al Shabaab
Next articleGudoomiyaha Degmada Beledweyne Cusmaan Maxamed Qalaafow Oo Ka Hadlay Amniga Guud!!